I-Silver Lining Retreat 🌤🏝FAST WiFi-45min ukuya olwandle
Umahamba-nendlwana ibungazwe ngu-David
Zama ukuphila okulula!! Le trailer yokuhamba elungiswe kakhulu inikezwe impilo entsha. Ngemva kokuyilungisa kabusha isilungele ukujatshulelwa izivakashi ze-Airbnb. Imizuzu engama-45 kuphela ukuya ogwini, vuka uphuze ikhofi elisha ekuseni ngenkathi ujabulela uchungechunge lwakho lwe-Netflix oluthandayo ngokunethezeka kwekamelo lakho ku-Visio 32 inch smart tv yakho (noma ngena kwezinye izinsiza ezifana ne-Hulu noma i-Disney+ nge-akhawunti yakho siqu ) Izingane zakho zingaphinda zibukele i-DVD yakwa-Redbox ku-Samsung TV encane egumbini lokuphumula.
Igumbi elanele lezimoto ezi-2 lapha phambi kwendawo olala kuyo futhi unobumfihlo obuphelele ukuze usebenzise sonke isikhala sakho nezivakashi zakho kuphela. Lena akuyona inkundla yokukhempa, itholakala epaki lasekhaya/eselula elenziwe elakhiwe.
(*inothi nge-MH park... empeleni ngazi omakhelwane abaseduze abangu-2 mathupha, futhi bangabantu abalungile.... kukhona nowesifazane osekhulile osebenzisa ukuphatha ipaki 2 amakhaya phansi ukusuka kule RV ebeka iso kukho konke ... indawo ephephile abantu abazokushiya wedwa futhi bakuvumele ube nemfihlo yakho....)
Uma ulindele ukuzithokozisa kwezinkanyezi ezi-5 ngentengo oyikhokhayo yale ndawo yokuhlala sicela ubhukhe kwenye indawo. Ngihlinzeka ngendawo yokuhlala ethengekayo yemindeni esiza wonke umuntu ukuthi akwazi ukuyisa imindeni yabo ezindaweni ezivame ukubiza kakhulu ukuzizwisa.
Siphakamisa abantu abadala abangu-2 kanye nezingane EZINGAPHEZULU kuka-3...... umbhede wendlovukazi we-RV ungaphatha noma yimuphi umuntu omdala (awukhululekile ngaphezu kuka-6'3”)... imibhede engashadile inobude obungamamitha angu-6 kuphela.... futhi inosofa kajack okwazi ukulala enye ingane ngokukhululeka...
4.37(35 okushiwo abanye)
4.37 · 35 okushiwo abanye
Isiteshi sikaphethiloli se-TOM Thumb - imizuzu emi-2
Isitolo se-Pic & Save - imizuzu emi-4
McDonalds - imizuzu emi-4
Isihlahla sedola - imizuzu emi-5
I-Flex Fitness Gym - imizuzu engu-6 (benza izivakashi zesikhashana)
I-Walmart - imizuzu eyi-11
🪖Eglin AFB - 30 min
🪖Inkundla ye-Hurlburt - imizuzu engama-44
☀️Amabhishi aseDestin - imizuzu engama-45
☀️I-Okaloosa Island Boardwalk Beach - 45 min
✈️ PNS Pensacola Airport - 52 min
Ngitholakala kalula ngohlelo lokusebenza lwe-airbnb kusukela ngo-8am - 11pm ngokuvamile, uma ngimatasa ngihlala nginothile ongaphendula noma asize ngemibuzo noma ngezinkinga.